Astrology & Zodiac Zviratidzo zveVana | Zodiac Sign Maitiro & Hunhu - Zodiac Zviratidzo
Astrology & Zodiac Zviratidzo zveVana
Tsvaga chiratidzo chemwana wako chezodhiac pazasi uye tinya pamufananidzo kana zita kuti uverenge zvese nezvehunhu hwavo, hunhu, uye hunhu! Uyezve, peta pasi kana kudzvanya kuti udzidze zvakawanda nezve nyeredzi yevana uye kuti ingakubatsira sei kuti unzwisise zvakawanda nezve mwana wako, mwana, uye achiri kuyaruka!
Aries Hunhu hweVana, Hunhu & Hunhu
Mwana weAries: Hunhu, Hunhu & Hunhu Mwana weAries anoita kunge anomhanya nekisimusi nyeredzi kune inoenda-inosimudzira simba! ...
Taurus Yemwana Maitiro, Hunhu & Hunhu
Taurus Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu Nechiratidzo cheTaurus chiri cheBull, zvinowanzo shamisa nguva ku ...
Gemini Tsika dzeVana, Hunhu & Hunhu
Gemini Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu Kuwedzeredza kunakidzwa, kupeta zodiac kunakidzwa! Ah, Gemini's. Ivo vakaita sebhokisi re ...
Kenza Yemwana Hunhu, Hunhu & Hunhu
Cancer Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu Vana veGomarara ndivo vekutanga vakasununguka-renji vana. Ndivo varoti vezviroto vanofarira ...
Leo Mwana Maitiro, Hunhu & Hunhu
Leo Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu Pane iyo jungle jimi, iro rakasimba sango jimu yako Shumba haifambe tonigghht - ...
Virgo Tsika dzeVana, Hunhu & Hunhu
Virgo Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu 'Kana tisina rugare, imhaka yekuti takanganwa kuti tiri ...
Libra Yemwana Maitiro, Hunhu & Hunhu
Libra Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu 'Kuti ude runako kuona mwenje.' - Victor Hugo Libras ndivo ...
Scorpio Yemwana Maitiro, Hunhu & Hunhu
Scorpio Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu Mwana weScorpio. Hongu. Iwe uchazoda kutora mavitamini ako uye tambo mukati me ...
Sagittarius Mwana Maitiro, Hunhu & Hunhu
Sagittarius Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu Pane pati goin 'kurudyi pano Mhemberero yekugara mukati memakore ...
Capricorn Mwana Hunhu, Hunhu & Hunhu
Capricorn Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu Pane pfungwa yekuti isu tese tiri vana venyeredzi. Kuti ...
Aquarius Yemwana Maitiro, Hunhu & Hunhu
Aquarius Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu Kana aya aive achiri mazuva evapfuti uye hupenyu Spaghetti Western, ...
Pisces Yevacheche Maitiro, Hunhu & Hunhu
Pisces Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu Dai faesi dzaive vagari vemvura vese vangadai vari maPisces. Asina kusimba, anonzwisisa uye anonetsa, ...
Astrology & Zodiac Parenting Matipi
'Ndinoshuva kuti dai vana vauya vaine gwara re'Kuti'! '
Dai pasi paine nickel yenguva dzese kana mubereki aitaura, achichema kana kupopota uku kuchema munhu wese angave mamirionea!
Kurera vana kungave kuri nyore kwazvo dai paine bhuku remashiripiti raipindura mibvunzo yedu yese nezvevana vedu, kunyanya pavanotanga kusvika.
Hunhu hwake hunenge hwakamira sei? Achavei kana akura? Maitiro ekukurudzira uye kukurudzira mwana wangu? Nyeredzi zvechokwadi haisi kuguma-zvose uye kuva-zvose kune iyo mhando yemibvunzo, zvisinei kuva neAstrological Chart yakagadzirwa uye kududzirwa pamwe nekunzwisisa Chiratidzo cheZodiac chemwana wako inzvimbo yakanaka kwazvo yekutanga.
Nyeredzi yevana inoenderana nemisimboti mimweyo inotonga zviratidzo zvevakuru, kureva kuti chirongwa chemweya chemwana neimwe nzira chakanyorwa munyeredzi senge mepu yatinogona kushandisa segwara kana tichiziva kuiverenga. Zvirokwazvo, kune zvimwe zvinhu zvakawanda zvinokanganisa hupenyu hwemwana senge nharaunda yavo uye chikoro, ichi chinongova chimwe chekukurudzira chaungashandisa kuti uone zvingabatsire mwana wako zvakanyanya, kana izvo zvinogumbura zvaangatarisana nazvo.
Vashandi veChiedza zvakare vanoraira kuti sepuzzle, shandisa Astrology sechimwe chikamu chechirongwa chikuru chekurera vana. Hapana chinogona kutsiva rako remukati izwi uye rakakwirira pachako mukurera maitiro. Zvese zvauri kuita pano kuwedzera kune iyo yakakosha pfungwa. Ichokwadi kuti Astrology imhando yekushopera nzira. Saka nekudaro ine painogumira. Mumwe munhu, kunyangwe pazera diki, anogara ari tenzi wemagumo ake.
virgo mukadzi uye gemini murume kushamwaridzana kuenderana
Chati Yemwana Astrological Chart
Saka chii chakabatanidzwa muchati yemwana? Zvinhu zvakawanda.
Kazhinji Nyeredzi inotanga nekutarisa kuChiratidzo Chinokwira panguva yekuzvarwa kwemwana. Maererano netsika, chiratidzo ichi chinotitaurira kuti vamwe vangadudzira sei maitiro nezviito zvemwana wako.
Iyo yakasungirirwa zvakanyanya kuzviitiko zvekutanga kwehucheche uye iko karmic vibrations iyo inoumba ramangwana remwanakomana wako kana mwanasikana. Seye yekutanga imba mapuraneti pano anokanganisa maonero emwana ekuzvida futi.
Sezvo hupenyu huchipfuurira, simba reimba ino rinokura.
Semuenzaniso, mwana ane Mars mune yekutanga imba akasimba kwazvo. Vazhinji vanokura vachiita zvemitambo uye vanototsvaga mabasa. Funga nezveimba yekutanga senge yemukati mumuviri inova hunhu hwemwana wako.
Chati yemwana wako yekuzvarwa inosanganisira nzvimbo dzemapuraneti, zuva nemwedzi panguva yekuzvarwa kwako. Izvi zvinokuratidza kuti denga rakatarisa sei kubva pawakazvara panguva yekuzvarwa kwemwana. Imwe neimwe yemapuraneti ine basa rakasiyana muchati yemwana wako. Semuenzaniso, zuva rinotonga pachako -kuziva uye nzira yemwana wako yekudyidzana nababa vake chimiro. Mercury inogadzirisa kutaurirana uye mazano, uye Jupiter inotarisira hutsika huzhinji.
Chiratidzo chega chega chekuzvarwa chine zvakare chinobatanidzwa seinotevera:
Kenza, Scorpio, hove
Taurus, Mhandara, Capricorn
Kuda Kudzidza Zvese Nezve Zodiac Zviratidzo?
Ita shuwa yekuverenga yedu ' Yekupedzisira Nongedzo kune Zodiac Zviratidzo '!
virgo murume scorpio mukadzi ari pamubhedha
mukadzi libra angaite sei kukwezva murume ane cancer
scorpio murume aquarius mukadzi ari pamubhedha
capricorn murume uye virgo mukadzi kuroora